Raysul Wasaare C/weli Oo Laamaha Amaanka Ka Raba Jawaab Ficil Ah Oo La Xiriira Madaafiicda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Kadib markii labadii habeen ee lasoo dhaafay magaalada Mqudisho laga mqalay madaafiic aan khasaare geysayn ayaa manta waxaa markii labaad kulan loga hadlay amaanka yeeshay hay’adaha amniga.
Kulanka waxaa ka qeybgalay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, wasiirka amniga Qaranka C/kariim Xuseen Guuleed, iyo ku-xigeenkiisa, taliyaha booliiska Jen. Saacid, guddoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan, dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka, taliyayaasha saldhigyada iyo kuwa nabadsugidda.
Kulankan oo ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa waxaa diiradda lagu saaray falalkii amni darrida ahaa ee ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho labadii habeen ee la soo dhaafay iyo sidii dabagal dhameystiran loogu sameyn lahaa cida ka dambeysa.
Wasiirka Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed oo ugu horeyntii goobta ka hadlay ayaa xusay in xalay illaa maanta ay aad ugu mashquulsanaayeen howlwadeenada ammaanku sidii jawaab cad looga keeni lahaa fowdada dhacday labadii habeen ee la soo dhaafay iyo cida iska leh mas’uuliyada dabacsanaanta amniga ee dhacday, maadaama goobaha ay ka dhaceen ay ku yaalaan saldhigyo iyo xarumo Boolis kuwaasoo loo xil saaray sugidda amniga.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Cabdiwali Sheekh Axmed oo isna hadlay ayaa ka dalbaday hay’addaha ku shaqada leh amnigu inay jawaab ka keenaan falalkan amni darrida ah ee dhacay, kuwaasoo khal khal geliyay deganaanshiyaha shacabka, wuxuuna xusay in kooxaha nabad diidku ay ka faa’iideysanayaan habacsanaan amni oo jirta, loona baahan in la adkeeyo nabadda har iyo habeena feejignaan dheeri ah la muujiyo.
“Waan ka xumahay khal khalka iyo cabsida la geliyay shacabka labadii habeen ee la soo dhaafay, kooxaha caddowgu waxay ka faa’iideysanayaan dal daloolada amniga ee jira, waana in gacan bir ah looga hortagaa, oo ay cabsadaan” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo ka dalbaday Wasiirka Amniga iyo taliyeyaasha amnigu inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo dayacda waajibkeeda ka saaran sugida amniga ee loo idmaday, si aaney mar kale u soo noqon falalkan oo kale.
“Dadku waxey naga sugayaan jawaab ficil ah, ma aha hadal, waxey dadku naga sugayaan iney jirto xukuumad iyo hay’ado amaan oo nabadgelyadooda sugi kara iyo inkale” aysuu sidoo kale C/weli Sheekh Axmed.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa kulan saacado qaatay xafiiskiisa kula yeeshay ka hor inta aanu ka qeybgalin kulankan Wasiirka Amniga Qaranka, taliyaha ciidanka Booliska iyo saraakiil kale, isaga oo kala hadlay sidii loo sugi lahaa amniga caasimadda loona dardargelin lahaa wada shaqeyn hay’addaha amniga dhexdooda ah.